इन्टरनेट मा उत्तम लोगो संसाधन
लोगो डिजाइन संसाधन: सल्लाह, डाउनलोडहरू, इन्फोग्राफिक्स, र उत्तम अभ्यासहरू
बुधबार, नोभेम्बर 4, 2020 बिहीबार, मार्च ० 11, २०२० Douglas Karr
लोगोको मूल्य के हो? नाइक जस्ता कम्पनीलाई सोध्नुहोस् र तपाईले लाखौं डलर भन्न सक्नुहुन्छ - तर सत्य यो हो कि, १ 1971 in१ मा, नाइकेले $ paid। तिरेको थियो तिनीहरूको लोगोको लागि। आजका दिन, पेशेवर लोगो डिजाइन को लागी जाने दर दर कहीं पनी $ १ and० र ,150०,००० को बीच हुन सक्छ। हामीले भर्खर एउटा ग्राहकसँग काम गर्यौं जुन लोगो डिजाइनमा $ १,50,000,००० खर्च भयो मात्र यो फेला पार्नको लागि जब उनीहरूले आफ्नो उद्योगको लागि गुगल छवि खोजी गरे… तिनीहरू फर्मबाट छुटकारा पाए र online २ for० को सट्टामा अनलाइन डिजाइन प्रतियोगिता गरे र मूल, अद्वितीय, र राम्रो डिजाइन गरिएको लोगो जुन उनीहरूको समग्र ब्रान्डमा फिट छन्।
हामी सम्पूर्ण रूपमा ब्रान्डि guide मार्गनिर्देशन, र साथमा लोगोको मूल्य देख्दछौं। त्यो महत्त्वपूर्ण लगानी हुनसक्दछ, तर कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन्। कहिलेकाँही तपाईले यति खर्च गर्न सक्नुहुन्न, यद्यपि, र हामी बुझ्छौं! यदि तपाईंलाई केवल लोगो चाहिन्छ भने, सबै ईमानदारीमा त्यहाँ केही आश्चर्यजनक स्रोतहरू छन्।
यहाँ logo० भन्दा बढी लोगो डिजाइन संसाधनहरू छन् जुन मैले अनलाइनमा पाए, प्रेरणादेखि पुरस्कारसम्म, प्रतिस्पर्धा र भीडसोर्सिंगमा, ब्लगहरू र ईतिहास साइटहरूमा। रमाईलो गर्नुहोस्!
एडोब इलस्ट्रेटरमा वास्तवमा लोगो सिर्जना गर्ने डिजाइनरको यो भिडियो मनपर्दछ।
उत्तम लोगो डिजाइन कसरी गर्ने
पत्ता लगाउनुहोस् कि यी १० आवश्यक लोगो डिजाइन सल्लाहहरूको साथ एक उत्तम लोगो सिर्जना गर्न के लिन्छ केवल रचनात्मक, थप लोगो डिजाइन इन्फोग्राफिक! रमाईलो गर्नुहोस्।
लोगो हुनु पर्छ सरल.
लोगो हुनु पर्छ कालातीत.
लोगो हुनु पर्छ रचनात्मक.
लोगो हुनु पर्छ पढ्नयोग्य.
लोगो हुनु पर्छ अनुकूली.
लोगो हुनु पर्छ उत्तरदायी.
लोगो हुनु पर्छ अद्वितीय.
लोगो हुनु पर्छ प्रासंगिक.
लोगो हुनु पर्छ चालाक.
लोगो हुनु पर्छ व्यावसायिक.
कहिलेकाँही तपाइँ जान्नुहुन्छ तपाइँ के चाहानुहुन्छ, तर केवल तपाइँको रुमाल स्केच एक पेशेवर लोगोमा लिन प्रतिभा छैन।
लोगोटाइपरहरू - स्केच अपलोड गर्नुहोस् (तपाईंको फोनको साथ एक तस्वीर, एक PowerPoint फाइल, वा पेन्ट मा एक चित्र) र हामी घण्टा मा यो एक महान लोगो मा परिवर्तन गर्नेछौं।
तपाईंको आफ्नै लोगो डिजाइन गर्नुहोस्
DesignEvo एक अनलाइन लोगो निर्माता हो जुन तपाईंलाई निःशुल्क लागि अद्वितीय र पेशेवर लोगो सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले खोज्नका लागि उपलब्ध एक मिलियन आईकनहरू, सयौं पाठ फन्ट र आकारहरू छनौट गर्न र शक्तिशाली लोगो उपकरण तपाईंको लोगो अनुकूलन गर्न प्रस्ताव गर्दछ।
तपाइँको लोगो बनाउन सुरू गर्नुहोस्
Crowdsourced लोगो डिजाइन संसाधन:
क्राउडसोर्स साइटहरूमा लोगो प्रस्तुत गर्न सक्ने ग्राफिक डिजाइनरहरूको वितरण नेटवर्क हुन्छ। विजेतालाई पैसा प्रदान गरिन्छ। (तपाईंको लागि महान ... डिजाइनरहरूको लागि सँधै उत्कृष्ट हुनुहुन्न!)
भीडभाड - 200 from बाट भीडसोर्स गरिएको।
डिजाइन प्रतियोगिता - १०० बाट तपाईको आफ्नै प्रतियोगिता सुरु गर्नुहोस्।
DesignCrowd - लोगो डिजाइन चाहिन्छ? तपाईंको डिजाइन अनलाइन अब क्रउडसोर्स गर्नुहोस्!
डिजिटल पोइन्ट - यी फोरमहरूमा तपाईंको आफ्नै मूल्य र आवश्यकताहरू पोष्ट गर्नुहोस्।
eYeka - क्राउडसोर्स गरिएको प्रतियोगिताहरू जहाँ तपाईं आफ्नो नाम राख्नुहुन्छ (अपस्केल मूल्य निर्धारण र पुरस्कार)।
४h घण्टा लोगो - s from from बाट क्राउडसोर्स गरिएको डिजाइन
ग्राफिक प्रतिस्पर्धा - $ 1,000 बाट प्रतिस्पर्धा
ग्राफिकराइभर - लोगो डिजाइन र टेम्पलेट्स
ह्याचवाइज - १०० बाट प्रतिस्पर्धा
लोगोमेवाय - २०० बाट प्रतिस्पर्धा।
लोगो टूर्नामेन्ट - लोगो पाउनुहोस् जुन तपाईं साँच्चिकै चाहानुहुन्छ -50 २-200 बाट 275०-२०० + कस्टम डिजाइनहरू छनौट गरेर।
99designs - 211 from बाट क्राउडसोर्स गरिएको डिजाइनहरू
माइक्रोबर्स्ट Crowd १our $ बाट क्राउडसोर्स गरिएको
pickyDESIGNS - तपाइँको डिजाइन प्रतियोगिता होस्ट गर्नुहोस्
ZenLayout - प्रतियोगिताहरू $ २ at० मा सुरू हुन्छ
व्यावसायिक लोगो कम्पनीहरू:
एजेन्सीहरू जसले लोगो सेवाहरू प्रदान गर्दछ सामान्य रूपमा ग्यारेन्टी गर्दछ कि उनीहरूको काम अनौंठो छ र तपाईंको लोगोलाई तपाईंको सम्पूर्ण ब्रान्डसँग मिलाउन कार्य गर्दछ।
किफायती लोगो डिजाइन - packages 45 बाट प्याकेजहरू।
BusinessLogo.net - packages 99 बाट प्याकेजहरू।
BXC - ब्रान्डिंग कम्पनी, एक उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्।
कम्पनी फोल्डरहरू - नि: शुल्क परामर्श, डिजाइन सेवा प्रति घण्टा $ 75 बाट सुरू
अनन्त लोगो डिजाइन - $ १२ from बाट डिजाइन
इन्कडी - design from$ बाट व्यावसायिक डिजाइन प्याकेजहरू
लोगोबे - $ १२ from बाट डिजाइन
लोगो कारखाना - लोगो डिजाइन $ 395 बाट
लोगो डिजाइन टीम - प्याकेजहरू १149 $ बाट
लोगो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन एजेन्सी - उद्धरणहरूको लागि सम्पर्क
लोगो लफ्ट - packages 99 बाट प्याकेजहरू।
LogoMagic.com - प्याकेजहरू $ २269। बाट सुरू।
LogoNerds.com - प्याकेजहरू $ २ at मा सुरू हुन्छ।
लग - प्याकेजहरू $ २ at मा सुरू हुन्छ।
लोगोवर्कहरू - HP बाट, $ २ 299। बाट डिजाइन।
नेटमेन - डिजाइन $ १$ from बाट सुरू।
भिस्टाप्रिन्ट - पूर्व-निर्मित र स्वचालित लोगोहरू तिनीहरूको सेवाहरूको निःशुल्क प्रयोगको लागि सुरू गर्दै।
लोगो प्रेरणा साइटहरू:
सायद तपाई आफ्नै लोगो बनाउन को लागी प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ वा केहि प्रेरणादायकहरु लाई भेट्न को लागी खोजी गर्न चाहानुहुन्छ! यहाँ लोगोहरूको लागि केहि महान संसाधन साइटहरू छन्।
ब्लग-ओमोटिभ्स - ब्रान्डिंग परामर्शक जेफ फिशरबाट
क्रिएटटिका - Envato बाट एक साइट
प्रसिद्ध लोगोहरू - एक वेबसाइट तपाइँलाई केहि उत्तम समाचार, समीक्षा, र लोगो डिजाइन उद्योग सम्बन्धित सम्बन्धित जानकारी ल्याउन समर्पित।
लोगोबर्ड - लोगोबर्ड एक लन्डन आधारित डिजाइन ब्लग र स्टूडियो हो।
लोगो कम्पनी - अनुकूलन लोगो डिजाइनहरू ... नयाँ उचाइमा डिजाइनहरू लिएर।
लोगो आनंद - लोगो डिजाइन प्रेरणा र ग्यालरी साइट।
लोगोपन्ड - लोगोपान्डले वेबको चारैतिरबाट पहिचान कार्यमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछ। सबै साइट विकास साइटहरू र यस साइटको लगातार क्षेत्रका लोगो कलाकार।
लोगो ब्लग - लोगो ब्लग लोगो डिजाइनको लागि वेबको प्रिमियर स्रोत हुन समर्पित छ।
लोगो डिजाइन ब्लग - लोगो डिजाइनर ब्लग एक ब्लग हो जुन ब्रान्डि,, लोगो र पहिचान डिजाइनमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित छ।
लोगो सपना पुरस्कार बाट - मासिक सबमिशनहरू र मासिक विजेताको साथ एक ब्लग।
लोगोलोग - लोगोलोग लोगो डिजाइनको बारेमा ब्लग हो।
लोगोलन्ज - समाचार र लोगोमा प्रवृत्ति।
मिडिया बिस्ट्रो - वार्षिक लोगो पुरस्कार साइट।
मेरो लोगो को लागी Highbridge
वर्षौं पहिले, मेरो डिजाइनरले मेरो लोगो देख्यो र उसले मलाई सोध्यो यदि मलाई यो अपडेट भएको चाहन्छ भने। म होईन भनिरहेको छु र त्यसपछि उनले मलाई आफ्नो संस्करणको साथ प्रदान गरे ...
यो दुबै अनौंठो र अविस्मरणीय (मेरो विचारमा) केहिको उत्कृष्ट उदाहरण हो। कलाकारले धेरै चीजहरू गरे:
उनले दुबै डी र के समावेश गरे (क्रमबद्ध)
उसले ग्राहकलाई बढ्न मद्दत गर्ने मेरो क्षमता प्रतिनिधित्व गर्न एक एरोको प्रयोग गर्‍यो।
उनले लोगोको प्रत्येक पक्षमा अपरंपरागत कोणहरू प्रयोग गर्थे भनेर प्रतिनिधित्व गर्थे कि मैले खास गरी काम गर्दिन।
जबकि मैले वास्तवमा उहाँलाई कहिल्यै नयाँ डिजाइनको लागि सोधेको थिइनँ, म तुरुन्तै प्रेममा पर्छु कि यसले कसरी मेरो व्यक्तिगत ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दछ। म अर्को दिन कार्ड, मेरा संकेतहरू, र मेरो वेबसाइट पुन: डिजाइन गर्दै थिए!
तपाईंको आफ्नै डिजाइन गर्न भेक्टर लोगो फाइलहरू खरीद गर्नुहोस्
हामी हाम्रो प्रायोजकहरूलाई प्रेम गर्दछौं Depositphotos र तिनीहरूसँग लोगोको एक टन छ जुन तपाईं भेक्टर फाईलहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईंलाई आवश्यक छ नजिकको केही हेर्नुहोस्? यसलाई खरीद गर्नुहोस्, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई आफ्नै बनाउनुहोस्।
अब भेक्टरहरूको लागि किनमेल गर्नुहोस्!
प्रकटीकरण: हामी यो पोष्ट भरै सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्दैछौं।
अतिरिक्त लेख र इन्फोग्राफिक्स
कसरी एउटा अद्वितीय र अविस्मरणीय लोगो डिजाइन गर्ने
वेबका लोगो कलरहरू
टैग: भयानक लोगो डिजाइनउत्तम लोगो डिजाइन कम्पनीउत्तम अनलाइन लोगो डिजाइनउत्तम अनलाइन लोगो डिजाइन सेवालोगो किन्नुहोस्लोगो खरीद गर्नुहोस्सस्तो लोगो डिजाइन अनलाइनसस्तो लोगोहरूभीड स्रोत लोगो डिजाइनभीडसोर्सभीडस्रोत लोगो डिजाइनभीडसोर्स गरिएको लोगोभीडसोर्स गरिएको लोगो डिजाइनभीडसोर्सिंग लोगो डिजाइनभीडसोर्सिंग लोगोडिपोजिट फोटोसलोगो डिजाइन गर्नुहोस्डिजाइन लोगोडिजाईनकोनेस्टडिजाइन ईभोइन्टरनेट लोगो डिजाइनकेवल रचनात्मकलोगो साइटहरूको सूचीलोगोलोगो खुशीलोगो ब्लगलोगो डिजाइन कम्पनी समीक्षालोगो डिजाइन प्रतियोगिताहरूलोगो इन्फोग्राफिकलोगो प्रेरणालोगो साइटहरूलोगो सर्वेक्षणलोगो भेक्टरहरूलगोलन्जlogopondलोगोमार्केटिंग लोगो विचारहरूमिडिया बिस्ट्रोजहाँ लोगो किन्न
Instapage: तपाईंको सबै-मा-वन पीपीसी र विज्ञापन अभियान ल्यान्डि Page पृष्ठ समाधान
जुन 6, 2010 मा 10: 40 PM
डगलस - हामीलाई तपाईंको सूचीमा समावेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
FYI हामीले भर्खरै 'हाइब्रिड क्राउडसोर्सिङ' को नयाँ, राम्रो रूप लन्च गरेका छौं जहाँ ग्राहकहरूले विशेष डिजाइनरहरूलाई डिजाइन प्रतियोगिताहरूमा पेश गर्न आमन्त्रित गर्न र भुक्तानी गर्न सक्छन् - आजबाट हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
मुख्य बिन्दु यो हो कि डिजाइनरहरूले ग्यारेन्टी भुक्तानी पाउँछन् यदि तिनीहरूको डिजाइन चयन भए तापनि। क्राउडसोर्सिङले विजेता हुनुपर्दैन सबै लिन्छ वा, तपाईंले भन्नुभएझैं, "डिजाइनरहरूका लागि राम्रो होइन"! यदि तपाईं मेरो अन्तर्वार्ता लिन वा DesignCrowd मार्फत केस स्टडी प्रोजेक्ट चलाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् http://twitter.com/designcrowd ????
साथै, यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा केही लोगो डिजाइन स्रोतहरू छन्।
जुन 7, 2010 बिहान 9:28 बजे
जब म गुगल "लोगो डिजाइन" को लागी तपाइँको क्षमता को प्रशंसा गर्छु, मलाई सस्तो लोगो डिजाइन को सम्पूर्ण प्रसार र उत्सव मनपर्दो लाग्छ। तपाईंले प्रस्ताव गर्नुभएका साइटहरूले कुनै पनि रणनीतिक विचार बिना नै स्लिम देखिने आइकनहरू ("यहाँ तपाईंको नाम" जस्तै) प्रदान गर्दछ।
क्राउडसोर्सिङ लोगो साइटहरू धकेल्दै - तपाईंले "मूल" लोगो प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न सुझावहरू पोस्ट गर्दा - थोरै लापरवाही नभएको खण्डमा हास्यास्पद छ।
तपाईं एक बिन्दुमा सही हुनुहुन्छ: तपाईंले तिर्नु भएको कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईका पाठकहरूका लागि मेरो आशा हो कि तिनीहरूले डिजाइन प्रतियोगिताको भागको रूपमा आफ्नो लोगो प्रदान गर्नु अघि अलि बढी लगनशीलता गर्छन्।
प्रिन्सिपल, रचनात्मक निर्देशक
जुन 7, 2010 बिहान 11:07 बजे
प्रतिक्रियाको कदर गर्नुहोस् (वास्तवमा गर्नुहोस्) र म बुझ्छु कि सम्झौता गरिएको स्थिति ब्रान्डिङ एजेन्सीहरू उनीहरूको योग्यता प्रमाणित गर्न अन्तर्गत छन्। मलाई तपाईंको मूल्यमा कुनै शंका छैन - मैले क्रिस्टियन एन्डरसन जस्ता फर्महरूले कम्पनीहरूलाई सयौं मिलियन डलरसम्म लिएको देखेको छु - त्यसमध्ये केही तिनीहरूको ब्रान्ड पहिचानको कारण थियो।
लोगो डिजाइन आक्रमणमा छ - यस बिन्दुमा कुनै अन्य वेब-आधारित कम्पनीको विपरीत होइन। हामीले क्रिस एन्डरसन जस्ता मानिसहरूलाई "फ्री!" भनेर चिच्याएका छौं। भिडियो होस्टिङ साइटहरूले YouTube सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, एनालिटिक्स कम्पनीहरूले Google सँग संघर्ष गरेका छन्, र CMS प्रणालीहरू जस्तै Squarespace WordPress सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
म एक अडान लिन सक्छु र तर्क गर्न सक्छु "कुनै स्पेस" छैन, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा यी सेवाहरू मध्ये केही प्रयोग गरेको छु र तिनीहरूसँग धेरै राम्रो परिणामहरू प्राप्त गरेको छु। त्यहाँ कुनै तथ्य लुकाइएको छैन कि तपाईले तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्न, तिनीहरू लोकप्रियतामा बढ्दैछन्। र नगद-स्ट्र्याप भएको र व्यावसायिक ब्रान्डिङ खर्च गर्न नसक्ने कम्पनीको लागि, किन सस्तो, पातलो लोगो खोज्ने? तिनीहरूले अन्यथा केहि नगरी हुन्थ्यो।
तपाईंले यी सेवाहरू मध्ये केही/धेरैलाई किन बेवास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने बारे पोस्ट गर्न पाउँदा म मन पराउँछु!
जुन 9, 2010 मा 1: 38 PM
GeniusRocket (www.geniusrocket.com), भूतपूर्व AOL कार्यकारी मार्क वाल्शको नेतृत्वमा र पिटर लामोटेद्वारा सञ्चालित, लोगो र अन्य रचनात्मक आवश्यकताहरूको लागि विश्व स्तरीय क्राउडसोर्सिङ क्षमताहरू छन्।
नोभेम्बर ८, २०१२ बिहान १०:५७ बजे
सूची साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद!
हामीले भर्खरै नयाँ लोगो डिजाइन प्रतियोगिता साइट सुरु गर्यौं: http://www.logoarena.com
अक्टोबर 10, 2011 बिहान 6:10 बजे
कृपया आफ्नो सूचीबाट marvellogodesign हटाउनुहोस् किनभने यो FRAUD हो। हेर्नुहोस् http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 andhttp://www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
अक्टोबर 10, 2011 बिहान 8:16 बजे
धन्यवाद, माइकल! मैले तिनीहरूलाई सूचीबाट हटाएको छु र क्रिएटिटिका थपेको छु।
नोभेम्बर ७, २०१३ बेलुका ६:३४ बजे
मार्वल डिजाइन लोगो डिजाइनहरूको सावधान रहनुहोस्। टाढा रहनुहोस् उनीहरूले जवाफ दिन उमेर लिन्छन्। अत्यधिक अव्यावसायिक
जुलाई,, २०१ at 3::2012। बिहान
अप्रिल 16, 2013 मा 7: 46 PM
मैले भर्खरै एउटा लोगो बनाएको छु http://www.logotypers.com तिनीहरूले मेरो स्केच लिए र यसलाई केवल $ 10 मा व्यावसायिक लोगोमा परिणत गरे (तर तपाईंले स्केच, वा ppt वा तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न केहि अपलोड गर्नुपर्नेछ)
अप्रिल 16, 2013 मा 8: 19 PM
कस्तो शानदार विचार! मैले लोगोटाइपरहरू यसको आफ्नै खण्डमा थपेको छु। धन्यवाद!
मई 21, 2013 मा 6: 04 एएम
लोगो डिजाइन साझेदारीका सबै स्रोतहरू उपयोगी छन्, रचनात्मक प्रस्तुतीकरणको साथ आश्चर्यजनक डिजाइन। तपाईंको द्वारा साझा गरिएका उत्कृष्ट सामानहरू। धेरै सराहनीय र प्रिय साझेदारीको लागि कृतज्ञ महसुस गर्नुहोस्।
मई 13, 2015 मा 3: 26 PM
मलाई यो सूची मन पर्छ। तपाईंले मानिसहरू र लिङ्कहरूका लागि विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गरिरहनुभएको तथ्य, राम्रो भयो... यो एक रक्षक हो!
मई 13, 2015 मा 8: 21 PM
धेरै धेरै गेब्रिएला धन्यबाद!
अक्टोबर 17, 2015 बिहान 1:34 बजे
अप्रिल 21, 2016 मा 8: 02 PM
मई 30, 2016 मा 3: 12 एएम
omg, त्यो महान छ
मई 30, 2016 मा 3: 14 एएम
उत्कृष्ट लिङ्कहरू, tnx
जुन 28, 2016 बिहान 9:25 बजे
लोगो तपाईको ब्रान्डको मिरर छवि हो। लोगो बनाउन को लागी तपाइँको नुस्खा धेरै आकर्षक छ।
हो, नाइकेको लोगोको मूल्य सुरुमा $35 थियो तर अहिले यसको मूल्य $600,000 भन्दा बढी छ। केवल एक राम्रो लोगो डिजाइन गर्नाले तपाईंलाई आफ्नो व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्न सक्दैन। तपाईंका सेवाहरू र उत्पादनहरूले तपाईंको लोगोको बललाई पनि चित्रण गर्नुपर्छ।
अक्टोबर 4, 2017 बिहान 6:02 बजे
मैले एक अद्वितीय लोगो बनाउनको लागि लोगो डिजाइन अवधारणाहरू खोज्दै थिएँ र तपाईंको पोष्ट फेला पारे। यो पोस्ट को लागी धन्यवाद। यो मेरो नयाँ परियोजना मा लागू गर्न को लागी केहि राम्रो विचार छ।
अगस्ट 29, 2018 मा 1: 30 AM
तपाईंको बहुमूल्य सुझावहरूको लागि धन्यवाद
डिसे 20, 2019 मा 9: 16 AM
लोगो डिजाइन को बारे मा एक अद्भुत पोस्ट। मैले पक्कै पनि नयाँ पोस्टको लागि धेरै प्रेरणा पाएँ। यस डगको लागि एक टन धन्यवाद, मेरी क्रिसमस!
जनवरी 7, 2020 4:08 बजे
राम्रो टिप्पणी Sally को लागी धेरै धन्यवाद! म आशा गर्दछु तपाईं अविश्वसनीय छुट्टी थियो।
मई 16, 2021 मा 12: 19 PM
जुन 29, 2021 बिहान 9:49 बजे
केही लोगो डिजाइन स्रोतहरू जुन प्रेरणाको ग्यारेन्टी छन्